Sina miaraka amina valizy sy bikini Emojis, mitady ny fodian'ireo mpizahatany sy mpamatsy | Espana i Espana Tspringwater
Espaniôla dia nanitsy ny isan'ny maty tamin'ny alatsinainy teo ary nanentana ireo mpanao fialantsasatra vahiny hiverina ny volana Jolay satria nanamora ny iray amin'ireo fanidiana henjana indrindra tany Eropa izy, na dia niahiahy aza ny orinasam-pizahantany momba ny famonjena ny vanin-taona mafana.
Ny firenena faharoa notsidihina faharoa dia nanidy ny vavahady sy ny morontsiraka ny volana martsa mba hikirakira ny valanaretina COVID-19, ary avy eo dia nametraka quarantine roa herinandro ho an'ireo mpitsidika ampitan-dranomasina. Fa hongotana izany fepetra izany manomboka amin'ny 1 Jolay, hoy ny fanambaran'ny governemanta.
“Ao aorinanay ny ratsy indrindra,” hoy ny minisitry ny raharaham-bahiny Arancha Gonzalez Laya nisioka tamin'ny emojis bikini, solomaso ary valizy.
“Amin'ny volana Jolay isika dia hanokatra tsikelikely an'i Espana ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena, hampiakatra ny quarantine, hiantoka ny fenitra avo lenta amin'ny fiarovana ara-pahasalamana. Manantena ny handray anao izahay 2! ”
Nampidirina tamin'ny 15 Mey tsy nisy fampitandremana kely dia niteraka fikorontanana teo amin'ny sehatry ny fizahan-tany sy ny fifanenjanana tamin'i Frantsa mpifanila vodirindrina aminy ny quarantine. Amin'ny fananganana azy dia manantena ny governemanta fa hanonitra ny fahasimban'ny fifandraisana teo aloha ary hanana toerana matanjaka hisarika ny mpizahatany vahiny amin'ity fahavaratra ity.
Manintona olona 80 tapitrisa isan-taona i Espana, miaraka amin'ny fizahan-tany mahatratra 12 isan-jaton'ny harinkarena faobe ary ampahany betsaka amin'ny asa, koa ny fizaran-taona dia manan-danja amin'ny mety hanalefahana ny fitontongan'ny toe-karena.
Ny minisiteran'ny fahasalamana koa dia nanitsy ny isan'ny maty indrindra teo amin'ny 2.000 ka hatramin'ny 26.834 taorian'ny nanamarinana ny angom-baovao nomen'ny faritra, ary nilaza fa olona 50 monja no matin'ny virus tamin'iny herinandro lasa iny, fianjeran'ny herinandro teo. Ny totalin'ny tranga dia nohavaozina koa ka hatramin'ny 235.400.
Ny trano fisotroana sy trano fisakafoanana any Madrid sy Barcelona dia navela hisokatra eny amin'ny habakabaka ivelan'ny antsasaky ny alatsinainy teo, saingy maro no nijanona nikatona satria nilanja ny lanjan'ny fikarakarana sakafo ho an'ny vitsivitsy fotsiny ny tompony.
Ny sasany tamin'ireo izay nisokatra dia pessimistic.
“Sarotra izany, tsy ho afaka hamonjy ny fizahan-tany isika, raha tsy tonga [ny] vahiny”, hoy i Alfonso Gomez, tompona trano fisakafoanana any Barcelona.